ရန်ကုန်မြို့နေရာတော်တော်များများတွင် ဗွီဒီယိုရုံများပေါ်လာပြီးအောကားသက်သက်ပြစားသောရုံများတွင်သူကြည့်နေသော ရုံလည်း တစ်ရုံ အပါအဝင် ဖြစ်လေသည်။ထိုရုံနှင့် ထိုကားများကြောင့်အသက်အစိတ်နီးနေပြီဖြစ်သော ကျော်ညွန့်မှာယခုမှ မိန်းမလိုချင်စိတ်များလိုးချင်စိတ်များတရွရွ ဖြစ်ပေါ်နေလေသည်။
နိုင်ငံခြားကားများဖြစ်သော အောကားများမှာ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက် ကောင်းခြင်း၊ ဆေးသားကြည်လင်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှိုးဆွမှု ထူးဆန်းခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ယောကျ်ား၏ လီးများကို မိန်းမက စုပ်ခြင်း၊ မိန်းမ၏ စောက်ပတ်အား ယောကျ်ားက ရက်ခြင်း၊ ပုံစံ အမျိုးမျိုး လိုးကြခြင်း၊ အားပါပါ လှုပ်ရှားကြခြင်းနှင့် လိင်ကို ပွင့်လင်းစွာ ဖြေရှင်းကြခြင်းများက ကျော်ညွန့်အား ကိလေသာစိတ်ကို ရွသထက်ရွအောင် လုပ်ပေးနေသကဲ့သို့ ရှိလေသည်။
အို …. အစ်ကိုကြီးကလဲ … ကဲပြီကွာ … သဲ အသက်ရှူ ကြပ်တယ် … အိအိဦးသာဒင်က အတင်းဖက်ပြီး နမ်းနေသည်။ မခင်မေက အလိုက်သင့် ပြန်ပြောနေစဉ် မခင်မေ၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖိပြီး စုတ်ယူလိုက်သည်နှင့် စကားသံများ ပြတ်ပြီး လှုပ်ရှားသွားသော ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို အထင်းသား မြင်လိုက်ရသည်။
ကာမကျမ်း ကြေဟန်တူသော လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ကျော်ညွန့် ရှေ့တွင်ပင် တဆင့်ပြီး တဆင့် တက်လှမ်းနေကြသည်။အထူးသဖြင့်ဦးသာဒင်မှာ ဦးဆောင်သူဖြစ်ရာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပင် သူလုပ်စရာများကိုအဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင် လှုပ်ရှားနေလေသည်။ မခင်မေကတော့ ဦးသာဒင် လုပ်သမျှ ကာမစိတ်များ ပိုတက်လာဟန်ဖြင့် တဟင်းဟင်း ညည်းပြီး တကျွတ်ကျွတ်နှင့် စုပ်သပ်လိုက် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး လူးလွန့်လိုက်နှင့် ဖြစ်နေရှာသည်။အား … အိုး … အင်း … ဟင်း … ကျွတ် ကျွတ် … အိုး … ဟင်းဟင်း ကွယ် …. အင်း … ဟင်းဟင်း“ ဟူသော မခင်မေ၏ အသံကလည်း အဆက်မပြတ် ထွက်ပေးနေလေသည်။
ကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းက ကျော်ညွန့်တစ်ယောက်မျက်လုံးပြူးသွားရသည်။ဦးသာဒင်က မခင်မေ၏ ဘိုက်သားပြင်ကိုအပေါ်မှ အောက်သို့စုံဆင်းကာ လျှာဖြင့် ပွတ်ဆွဲ ရက်လာရာမှ လုံးဝန်းပြည့်တင်း ဖြောင့်စင်းသည့် ပေါင်တံကြီးများအား အသာဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး ဖောင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်မို့မို့ ကြီးအား ဆက်ပွတ်ရက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အား … လား … လား … အိုး ….. အစ်ကိုကြီးဆတ်ကနဲ တွန့်သွားသော မခင်မေနှင့်အတူ ကျော်ညွန့်၏ ကိုယ်လုံးကြီးမှာလည်း အိမ်နံရံနှင့် ပိုမို ကပ်သွားရသည်။
“အိုး … အစ်ကိုကြီးရယ် အား ကောင်းလိုက်တာ အို ဆောင့်စမ်းပါ … အိုး … ဖြည်းဖြည်း … သိပ်မကြမ်းနဲ့အုံး … အီး … ဆောင့် ဆောင့် … အား ဟုတ်ပြီ …. အား … အာ ဘယ့်နှယ် ချော်နေရပြန်တာလဲ … မြန်မြန်လုပ်ပါ … အိုး … အိုး“ ဟူသော ဦးသာဒင်၏ ပုံစံအမျိုးမျိုး လိုးပေးမှုကို အလိုက်သင့် အလိုးခံရင်းကမခင်မေ၏နှုတ်ဖျားမှအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေပုံကလည်း သိပ်နားမလည်သော နိုင်ငံခြားသားများထက် ကျော်ညွန့်အတွက် သာလွန်စွာ ခံစားမြင်တွေ့နေရသည်။
သူများလင်မယားလိုးတာ ချောင်းကြည့်ရင်း ကျော်ညွန့် သုတ်နှစ်ခါထွက်ပြီးသည် အထိ ဖြစ်သွားရသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလိုးပုံကို ကြည့်ရင်း လိုးကာစမှာ တစ်ခါ သုတ်ထွက်သွားရပြီး ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း လီးထပ်တောင်လာမှုကြောင့် နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီး သုတ်ထွက်သည်အထိ ဂွင်းတိုက်မိလိုက်သည်ကိုတော့ ကျော်ညွန့် မေ့တော့မည် မဟုတ်ပေ။အားပါးတရ လိုးပွဲ နွှဲပြီးသွားသော ဦးသာဒင်တို့ လင်မယား၏ တယုတယ လုပ်နေကြပုံနှင့် အနားယူသည်အထိ ကြည့်ပြီးနောက် ကျေနပ်စွာ ကြည့်ခဲ့ရသော လိုးပွဲကို ကျောခိုင်းသွားချိန်မတော့ ကျော်ညွန့် ဒူးခေါင်းများ ချောင်သလိုဖြစ်ကာ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး နုံးသွားရခြင်းကလည်း ကျော်ညွန့်အတွက် ထင်ရှားနေမည့် အတွေ့အကြုံပင် ဖြစ်ပေတော့မည်။
ပြည့်တင်းသော လက်မောင်းသားများ၊ချပ်ရပ်သော ဘိုက်သားနှင့် သေးကျဉ်သော ခါးကလေးများ အောက်ဝယ် ပြန့်ကားထွက်လာသည့် တင်ပါးဆုံသားကြီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လိုက်အောင်စွင့်ကားလျက် ရှိသည်။ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ပေါင်တံကြီးနှစ်ချောင်းကလည်း အရင်းတုတ်ခိုင်ပြီးအဖျားဘက်သို့ တစ်ဖြောင့်တည်း သွယ်ဆင်းသွားပုံမှာ ဆင်နှာမောင်းသဖွယ် အချိုးအစား ကျနလှသည်။